अनौठो बिश्व – Vision Online News
स्विट्जरल्याण्ड सरकारले सुसाइड मेसिनको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दियो, अब मृत्यु १ मिनेटमा
स्विट्जरल्याण्ड, मंसिर २२ । स्विट्जरल्याण्ड सरकारले सुसाइड मेसिनको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । यो मेसिन बनाउने कम्पनीको दावीअनुसार यो मेसिनले कुनै पनि व्यक्तिलाई १ मिनेटभित्र कुनै पीडाबिना मृत्यु दिन सक्छ । यो मेसिन कफिनको आकारको छ । यो मेसिनको माध्यमबाट अक्सिजन लेभल अत्याधिक कम गरिन्छ जसका कारण एक मिने...
नेपालीहरुको महान् चाड बडा दशैं, शुभ दिपावली तथा छठ पर्वको हार्दिक शुभकामना ।
आज देशभर गाईजात्रा पर्व मनाइँदै, सरकारले पहिलो पटक देशभरका नेवारी समुदायलाई सार्वजनिक बिदा
काठमाण्डौँ, भदौ ७ । प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म आठ दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व ‘गाईजात्रा’ आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर आरम्भ गरिँँदैछ। एक वर्षभित्र दिवङ्गत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिँगारी आ–आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीह...
काठमाडौं, माघ १४ । भक्तपूरको राधेराधे चोकको देब्रेपट्टि उभिएको अजङ्गको वेवारिसे भवन देख्नासाथ सबैको मनमा उब्जिने प्रश्न हो, ‘यति ठूलो भवन कसको होला ? किन यो हातलमा राखिएको होला ?’ आदि । भाटभटेनी सुपमार्केटको छेवैमा निर्माणाधिन यो भवन वर्षौदेखि ठडिएको भएपनि ‘फिनिसिङ’ भने हुन सकेको छैन । यस्तो छ भित्री कथा...
काठमाडौं, असार ८ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सोमबार आयोजना गरेको ‘जुम एप’ भर्चुअल बैठकमा अचानक पोर्न भिडियो खुलेपछि कार्यक्रम स्थगित भएको छ। पर्यटनसँग सम्बन्धी सुरक्षा निर्देशिका सार्वजनिक गर्न दिउँसो १ बजे ‘जुम एप’ भर्चुअल बैठक आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भ...
आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दै, कहाँबाट र कसरी हेर्न सकिन्छ ?
काठमाडौँ, असार ७ । आषाढ कृष्ण औँसीका दिन आज खण्डग्रास (आधा सूर्य ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्दैछ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार ग्रहणले बिहान १०:५० बजे स्पर्श गर्नेछ । मध्याह्न १२:३८ बजे मध्य र अपराह्न २:२३ बजे ग्रहणले मोक्ष प्राप्त गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले हामीलाई जानकारी दिए ।...